Izakha Mzimba ze Minerali Zebhokhwe
Izakha Mzimba ze-Minerali Ezidingwa Zibhokhwe
I–calcium (Ca) kunye ne – phosphorus (P) zigcineka emathanjeni, kwaye iibhokhwe zinokugcina futhi ziphinde zithathe kwalapha kulovimba ngeemini zikaxakeka. i–calcium (Ca) kunye ne-phosphorus (P) zibaluleke kakhulu njengezinto ezenza amathambo kunye namazinyo kwaye ziyadingeka ekwakhiweni kwamathambo kunye nemisipha kwitakane elisakhulayo lebhokhwe. Ubisi lune – Ca eninzi kengoko okona ibhokhwe ikhupha ubisi kukona idinga i–Ca eninzi emzimbeni. Ingca yamadlelo i-Lucerne ine–calcium eninzi okanye ingafunyanwa nakokunye ukutya.
Ukunqongophala kwe Ca kungakhokelela ekupheleni kobisi kwaye nakumkhuhlane wobisi kwiibhokhwe. I-calcium kunyene-phosphorus zinonxulumano kwaye kufuneka zikho ngemithamo ekwi reyishiyo (ratio) ethi 2:1. I–phosphorus iyadingeka ekukhuleni kwemisipha nasekukhulenni kwamathambo kwaye ibalulekile ekubeni ibenesakhono sokubamba isondlo xa isetyisa. Iimbotyi zinezinga eliphezulu le P. I–magnesium iphembelela owonamsebenzi uphambili wenkqubo yengqondo kwaye inonxulumano nazo zombini I Ca ne P.
Ezinye izakhamzimba ze minerali, njenge selenium kunye ne copper, zidingeka kuphela ngemithamo emincinci - as trace elements. I-Copper (Cu) inceda ekucoleni ukutya kwaye I-selenium ibalulekile ekwakhiweni kwamajoni omzimba. Iimpawu zonqongophalo ziquka isifo somsipha omhlophe kunye nokufa kwamatakane engekazalwa.
I-Zinc inenkxaxheba ekwenzekeni kwembewu (sperm) kwaye iimpawu zonqongophalo ziquka ukuphunguka ekukhuleni koboya, I–bhaktheriya eninzi emlonyeni eyenza amathe amaninzi, ukoma kwamathambo kunye nokungavukelwa kweenkunzi. Iimpawu zonqongophalo kwi iodine zingabonwa ekudumbeni kwe - thyroid kunye nakwizikhumba eziqinileyo.
Izakhamzimba Zesondlo kunye ne-Minerali
Ukuba ukutya kobisi kuthengelwe iibhokhwe zobisi, abavelisi bokutya ngokommo baquka uluhlu lwezakhamzimba kunye ne minerali. Ukuba ukutya kobisi lwebhokhwe luthengiwe, uveliso lwesondlo ludla ngoquka uluhlu lwezakha mzimba kunye ne-minerali. Ukuba isondlo sobisi asityiwanga, kubalulekile ukuyondla iiminerali ukuze ibenokutya okudingekayo emzimbeni. ininzi iintlobo ze-minerali ezifumanekayo ukwenzela amathuba kunye neemeko ezifanelekileyo. Ii-minerali ezininzi zinetyiwa ethe xhaxhe ukwenzela ukuba zingatyiwa kakhulu zibhokhwe, kodwa kucingelwa ukuba iibhokhwe ngokwayo itya ezilungele imfuno zezakhamzimba wesondlo sayo.